Ukuba ukhangele imbali yemfundo eYurophu, unokubona ukuba emashumi embalwa edlulileyo kwakukho izikolo ezihlukeneyo zabafana kunye namantombazana. Ngaba kufuneka sihambelane nalo mgaqo ngoku? Umxholo wendaba yethu yanamhlanje ngu "Ukukhawuleza kwengxaki yemfundo eyahlukeneyo yamakhwenkwe namantombazana."
Abantu abaninzi banamhlanje bakhumbula ukuba ebuntwaneni babo konke "kwakunye." Izambatho, iincwadi zezifundo, ukutya, abanonophelo, imidlalo, i-anecdotes, umsebenzi wesikolo. Esikolweni, umntu wazama ukufihla ifomu. Kwi-kindergarten - nangona amakhwenkwe amantombazana awazange ahluke kakhulu kwiinkwenkwe zamakhwenkwe. Ungakhankanyi i-pantyhose.
Abantu abadala bayazikhumbuza kakuhle izigaba esazithe zaza kubuninzi nobuninzi beli xesha. Uvakalelo lweentlonelo lubambisana nezicelo zabantu ngabanye - umntwana unako kwaye ufuna ifowuni, "njengo-Masha", nangona kunjalo, umbala wemibala eyahlukeneyo, njl. Namaxesha onke amawele afanayo awanakufuna ukufana.
Abantwana bafuna ingqwalasela kumntu ngamnye. Andiyithandi nayiphi na impahla, iinwele, kunye nokuqeqeshwa komntu ngamnye. Esixekweni sam, abazali abanakho ukuhlawula i-dollar ayi-100 ngenyanga ukuze imfundo yomntwana ihlelwe ngamanga ngamazwi kunye nokuhleba, ukuxubusha ngokwabo kunye nootitshala bokamva bomntwana, bafuna kwaye ... bafike kwimfundo ngamnye.
Kutheni oko? Kucacile ukuba bashukunyiswa ngumnqweno wokuhlakulela zonke izakhono ezikhethekileyo zomntwana kwaye bangayihoywa nayiphi na. Kodwa kulo mzekelo, uxhulumano lomntwana kunye nentlalo lulahlekile. Ukuqhagamshelana akukhulisi "ngokwakho". Musa ukuthola izakhono ozifundileyo ukuba uziphathe njani kwiqela labanye abantwana okanye abadala. Amanqaku amaninzi ephuhlisa amaqela akwazi ukufikelela kumntwana ngokuqeqeshwa komntu ngamnye. Ngenxa yoko, i-modern teaching and psychology yezingane iyavuma ukuba ukuba abazali bafuna ukuba umntwana akwazi ukuthetha ngokukhawuleza nabanye abantu, kufuneka aqale ukufundisa okusemandleni kwaye ngamaqela. Umbuzo "njani?"
Isicelo sabantu basemgangathweni wokufundisa abantwana sele sele senziwe. Umbuso, ngenxalenye yayo, ufuna ukubona abantu abanobuhle kunye nomzimba, nangaphezulu, urhulumente ufuna ukuzalisa "ukugcinwa kwengqondo" kwelo lizwe. Ukuzalisekisa ezi njongo, inkqubo yemfundo idinga indlela entsha, yokuqhubekayo kwimfundo yabantwana basenkulanga kunye nabantwana besikolo.
Kucacile ukuba akubona bonke abantwana abanesipho esifanelekileyo sokufuna uqeqesho lomntu ngamnye.
Nangona kunjalo, inkqubo ekhoyo yezemfundo kaninzi ayivumeli ukunika izipho ukubonakalisa kwisigaba sokuqala soqeqesho kwaye inokukunceda ukunqoba zonke iimpawu "ezingavamile" zomntwana, ezifuna ukunyuselwa kwinqanaba lomfundisi okanye utitshala.
Sinokuqinisekisa njani indlela efanelekileyo yokuqeqeshwa komntu omncinci kunye nomhlali wesikhathi esizayo kunye nokuxhamla kwakhe kunye noluntu?
Enye yeendlela ezikhethiweyo-ukuhlukanisa imfundo yabantwana ngokubhekiselele kwesini, ukuphuthuma kwengxaki kunye nokubonakala kwayo kubonakala. Amakhwenkwe ahlukeneyo. Amantombazana ayahlukana. A yintsha. Kodwa, njengoko sikhumbula, into entsha isele iyenzeka kwindawo ethile nomntu.
Ekuqaleni kwenkulungwane yokugqibela, abafundi be-gymnasium kunye neentombazana zegrama zadibanisa kuphela emva kweendonga zamaziko emfundo. EYurophu naseMerika, olo qeqesho luye lwasasazeka kwaye luyaziwa namhlanje.
Kule minyaka yonke edlulileyo, inkqubo yethu yemfundo iye yazama ukufundisa wonke umntu kunye, ngaphandle kokuqwalasela into yokuba amantombazana kunye namakhwenkwe banemibono ebonakalayo kwizinga lezesengqondweni, imbono, i-neurophysiology, i-physiology. Kwindoda nabasetyhini nawuphi na ubudala, ukukwazi ukukhumbula, ukusebenza, iindlela zokuzicingela ngokwazo zihluke kakhulu kangangokuthi zifuna iindlela ezahlukeneyo zokuphuhliswa kwazo, oku ngenye yobungqina bemfundo ehlukeneyo yabafana kunye namantombazana. Amantombazana kunye namakhwenkwe afuna imisebenzi eyahlukileyo, imibongo eyahlukeneyo, ukusetyenziswa okuhlukeneyo kunye nezindlela ezahlukeneyo zokubonisa ulwazi. Kwakhona, iindlela zokuthonya abantu kwiqela lamakhwenkwe namantombazana kufuneka ahluke. Izinto ezincinci ezibuhlungu kwengqondo yengane ziya kuba xa ukufundisa kwiqela lihluke ngobulili.
Ngokuqinisekileyo, utitshala uya kufumana umphumo ophezulu kunye nemigudu embalwa kwimfundo yezingane "ezifanayo".
Ukuba ukuqonda okufanayo kwengqondo kubonakala kwiqela labantwana, ukusetyenziswa kweendlela ezisetyenzisiwe ngabafundisi kuya kwanda.
Ngelishwa, ukufundiswa kwemfundo eyahlukeneyo yamakhwenkwe namantombazana kwakucatshulwa kwikhulu leminyaka elidlulileyo njengobonakaliso be-chauvinism okanye ibhinqa ixesha elide. Ngaphandle kwezi ziko zemfundo apho ubuqulunqi bokuqala bavumela ukuqaliswa kwemfundo eyahlukileyo kubafana kunye namantombazana - indlela yokufunda kunye neyobugcisa ibuthathaka kwaye isekelwe kwimithombo yamanye amazwe.
Indlela yaseRashiya eyahlukeneyo kwimfundo ekufundiseni yenziwa ngemihla yeRashiya yangaphambili. Izifundo ngeengqondo zeengqondo zibonisa ukuba iindlela ze-psychotherapy, kunye neengxaki zengqondo zabemi ngokwabo, zatshintshile ngaphezu kweminyaka eyi-100 kwinqanaba elaneleyo lokungafihli ngokupheleleyo kweendlela ngokwabo. Ngako oko, ukuqeqeshwa kwiindlela ezindala akukwazi ukuqhutywa ngekhulu lama-21.
Ngako oko, abo bantwana abanjengoku ngokuthatha inxaxheba kwimfundo ehlukeneyo-bafuna impembelelo ekhethekileyo yootitshala nabafundi beengqondo ukuze baqinisekise ukusebenza kwendlela ngokubanzi kunye neendlela ezahlukeneyo ngokukodwa.
EYurophu, okwangoku, ukwahlukana ngokwesini ngokobulili kwandisa i-geografi imihla ngemihla, kuba le ndlela iyamkelwa njengendlela eyona nto yokuphucula ukuhlaziywa kwemfundo. Ngoku uyazi zonke malunga nokuphuthuma kwengxaki yemfundo eyahlukeneyo yamakhwenkwe namantombazana kwaye ukhethe indlela efanelekileyo kakhulu yomntwana wakho.
Ngaphandle kwezinyembezi noxinzelelo: indlela yokulungiselela usuku lokuqala kwi-kindergarten
Umntwana wakho waya kwiklasi yokuqala
I-cheesecake ye-pastry cheesecake
Indlela yokukhetha ii-oysters ezilungileyo
Iimfihlelo zobuhle kunye nokuvisisana komdlali wesicatshulwa uMaria Kozhevnikova
Shish kebab isiGeorgia